Cabdiwali Gaas oo taageeray go’aanka Musharixiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Cabdiwali Gaas oo taageeray go’aanka Musharixiinta
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ ayaa taageeray go’aanka ay Midowga Musharixiintu qaateen ee ah in Rajiimka Farmaajo hoggaamiyo looga hor tago bannaan-bax nabadeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Dowlad goboleedka Puntland, Cabdiwali Gaas ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xiisadda adag ee maalmihii danbe ka aloosneed magaalada Muqdisho.
Cabdiwali Gaas wuxuu sheegay in bannaan-buxu uu yahay dastuuri uu sharcigu siinayo qof walba oo muwaadin ah inuu aragtidiisa ku soo gudbiyo mudaharaad nabadeed, Dowladdana looga baahan yahay in ay dadka ku dhiira galiso oo ay barto dibad-baxa halkii ay hor is taagi lahayd.
“Banaan-baxa dadku waxa ay ku cabbirayaan dareenkooda iyo aragtidooda waana dastuuri aan cidna diidi karin, waa in aan baranno oo Dowladdu in ay hor is taago iska daaye dadka waa in ay barto”, Ayuu yiri Gaas.
Wuxuu qalad iyo meel-ka-dhac ku tilmaamay wixii Jimcihii hore ka dhacay Magaalada Muqdisho wuxuuna Golaha Midowga Musharixiinta ku taageeray go’aankooda ah qabashada bannaan-bax nabadeed si loo diido kali-taliska koraya.
Cabdiwali Gaas wuxuu marmarsiyo ku sheegay COVID-19-ka ay Dowladdu ku andacooday in aan mudaharaad la qaban karin, wuxuuna si adag kaga soo hor jestay in la caburiyo dad doonaya in aragtidooda si nabad ah u soo bandhigaan.
“Anigu marnaba ma qabo in in dalkaan dib loogu celiyo xukun kali talis a h oo ah waxa keenay in Soomaaliya gasho marxalad aad u adag, dhiig badan ayaa loo daadiyay xoriyadda hadda jirta, waa in la diido cid kasta oo dalka dib ugu celineysa Diktaatooriyad”, ayuu yiri Gaas.
Inta badan madaxdii hore ee xilalka kala duwan ka soo qabatay Soomaaliya ayaa si adag kaga soo hor jeeda qaabka ay wax u waddo Dowladda uu waqtigii sharciga ahaa ka dhamaday ee Farmaajo hoggaamiyo taas oo dalka galisay jahawareer siyaasadeed.